Ny filohan'ny filankevi-pitantanana afrikana dia nanao fanolorana ny loka GUBA amin'ny fo
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filohan'ny filankevi-pitantanana afrikana dia nanao fanolorana ny loka GUBA amin'ny fo
Birao fizahantany afrikanina • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Ghana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News
Filohan'ny ATB ao amin'ny GUBA Awards
Vao avy natao ny GUBA Awards 2021, ary nahafinaritra ny nahita an'i Alain St.Ange, Filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany (ATB) any Ghana nanolotra ny loka GUBA Nana Yaa Asantewaa Entertainment Mogul Award. Naneho fahafaham-po ny maro tamin’ny fankalazana ny takariva lehibe tamin’ny talata alina nahita an’i Alain St.Ange nanidina nankany Ghana mba handray anjara amin’ny hetsika African Awards.
Navoaka tao amin'ny media sosialy ny fanehoan-kevitra nataon'ny Minisitry ny Fizahantany taloha tao Ghana, ny Right Hon. Catherine Abelema Afeku.
Hoy izy: “Eny, nahafinaritra i Alain. Nahafinaritra ny nahita anao ry Alain. Mampirehareha anay rehetra amin'ny indostrian'ny fizahantany ianao. ”
Nandefa andiana sarin'ny fandraisan'i Alain St.Ange tamin'ny hetsika Ghana Awards ireo matihanina amin'ny fizahantany avy any Ghana.
Alain St.Ange, izay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB), dia ny minisitry ny fizahantany, ny sidina sivily, ny seranan-tsambo ary ny ranomasina malaza Seychelles teo aloha, ary ilay olo-malaza sy manan-kaja amin'ny fizahantany izay iray amin'ireo kandidà afrikanina roa ho an'ny toeran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO. tamin’ny fifidianana 2017. St.Ange koa dia iray amin'ireo kandidà telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena Seychelles amin'ny taona 2020.
Rehefa niakatra an-tsehatra tao amin'ny toeram-pialam-boly goavana ny Ghana, hoy ny Minisitra teo aloha St.Ange: “Ny GUBA Nana Yaa Asantewaa Entertainment Mogul dia mankalaza vehivavy be herim-po sy mahatanty izay mpilalao lehibe amin'ny indostrian'ny fialamboly ary nanova ny indostria tamin'ny foto-kevitra vaovao. Ny GUBA Nana Yaa Asantewaa Entertainment Mogul dia tsy misy afa-tsy ny mpilalao sarimihetsika sy masoivohon'ny marika Nana Ama McBrown. Avy eo izy dia nanasa ny rehetra hijery horonan-tsary fijoroana vavolombelona momba ilay nahazo loka.
Nana Ama McBrown dia toetran'ny Bizz malaza indrindra Ghaneana ary tia amin'ny maha-andriambavy an'ny firenena azy. Mpilalao sarimihetsika Ghaneana izy, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra ary mpanoratra mozika. Nalaza izy noho ny anjara asany tao amin'ny andian-tantara Tentacles. Taty aoriana dia nahita fahombiazana mahazatra izy taorian'ny anjara asany tao amin'ny sarimihetsika amin'ny teny Twi "Asoreba". Izy no mpampiantrano ny fandaharana amin'ny fahitalavitra McBrown Kitchen sy ny fandaharana resaka fialamboly United Showbiz ao amin'ny UTV.
Niakatra an-tsehatra niaraka tamin’i St.Ange i Aba Blankson avy any Etazonia nanao ny voninahitra tamin’ity lanonana mari-pankasitrahana ity ary izy no nanasa an’i Nana Ama McBrown hiakatra an-tsehatra handray ny loka.
Ny GUBA Awards dia nankasitraka sy nanetsika ny Afrikana ho lasa malaza nandritra ny folo taona mahery. Lady Dentaa Amoateng MBE no mpanorina ny GUBA Awards, ary teo an-tanana tany Ghana niaraka tamin'ny Who's Who of Ghana izay nivory betsaka mba hijery ny lanonana natao voalohany tao Ghana ary nentina tany amin'ny lisitr'ireo olo-malaza manan-kery izay anisan'ny diaspora avokoa. Ny lanonana mari-pankasitrahana voalohany toy izany dia natao tamin'ny taona 2019 tany Etazonia ary natrehin'i HE Nana Afuko-Addo, Filohan'i Ghana, sy HE Jean-Claude Kassi Brou, Filohan'ny Vaomiera ECOWAS, niaraka tamin'ireo olo-manan-kaja maro hafa.
“Androany no manamarika ny 100 taona niorenanao. Mandria am-piadanana tanteraka Nana Yaa Asantewaa. Misaotra noho ny herim-po, ny faharetana ary ny herim-po! Hankasitraka hatrany an'i Nana Yaa Asantewaa ny Ghaneana, reny mpanjakavavin'ny Asante Warrior, izay nandray anjara tamin'ny fanafahana ny vahoakany sy ny fireneny ny fikatrohana sy ny tetika miaramilany. Ny andraikiny tany Ghana dia nanosika ny filamatra nasionalista tany amin'ny faritra hafa ao amin'ny faritra Afrika Andrefana, izay nahatonga ny firenena maro nahazo fahaleovan-tena, "hoy i Ramatoa Dentaa Amoateng MBE raha nanao lahateny tamin'ny fivoriana taorian'ny nandehanan'ny Vadin'ny Repoblika ny tenany teny an-tsehatra. manolotra loka ihany koa.